Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: vehivavy mirevy hanambady vahiny | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: vehivavy mirevy hanambady vahiny
Tsy dia hoe fanirina noho ny fitiavana manokana vahiny, fa mianjady tafahoatra ny fahantrana ka ny fahazoana vady avy any ivelany no anisan’ny fomba azon’ny vehivavy maro antenaina ivoahana avy ao anatin’ny fijaliana nohon’ny fahantrana. Noho izany antony izany, tsy dia afaka hiseho sarotsarotiny ireo vehivavy malagasy manipy fintana hanjonony vady vahiny. Misy ihany moa ny fifanambadiana malagasy sy vahiny izay tazana fa mifanentana tsara ny roa tonta, fa matetika dia, na efa zokiny lavitra ilay vahiny na mizaka fahasembanana. Ny fahanterana sy ny fananany kilema moa no anisan’ny antony anankianana ny fivadian’ny tovovavy malagasy amina lehilahy sinoa. Inona moa no maha samy hafa amin’ny fanambadina an’ireny vazaha indraindray efa mangorera, maro amin’ireo tovovavy sodokan’ny fanomezana toky amin’ny fandehanana hiaina any ivelany maneninenina tsy misy ohatran’izany, tena diso fanantenana. Ny fanontaniana dia hoe ahoana no tsy misy sakantsakana ny fivadiana amin’ny vazaha lahy nefa etsy andaniny enjehana ary ampakarina fitsarana ny fanomezana hasina fanambadiana amina sinoa lahy ?
Angamba tsy mbola nisy naheno fanamelohana sy fanagadrana noho ny fikarakarana fanambadiana vehivavy malagasy tamina lehilahy vazaha. Fantatra hono fa ny Sinoa dia sahy mandoa vola be, hatramina 400 million iraimbilanja. Inona moa no maha samihafa ny fomba ampiasain’ny Sinoa eo amin’ny fitadiavana vady sy ireny «site de rencontre» ifandraisan’ny mpila sy ny mpitady ? Araky ny fahitana ireo voaheloka eny amin’ny fitsarana dia Malagasy no mpanelanelana, na atao hoe mpanera aza. Inona no maha ratsy izany kokoa raha ampitahiana amin’ny «site vazaha» ? Raha vao Malagasy ve no mitrandraka sy manilika tombony amin’ny asany dia hapangaina hatrany ho manao risoriso sy izao karazana kolikoly rehetra izao?
Raha ohatra manaraka antsakany sy andavany ny fepetra rehetra tsy maintsy tanterahana ahafahana misoratra am-panambadina, inona moa no tena antony ampakarana ny «officier d’état-civil» sy ny sekretera any amin’ny fitsarana izay manameloka azy ireny ka mandefa azy any am-ponja higadra herintaona toy ny farany teo? Moa ve efa nisy manampahefana nitsivalana tamin’ny vazaha noho ny fiahiahina azy hampijaly ilay vehivavy malagasy ampakariny am-panambadiana ? Misy moa ny fiampangana ny Firenena Malagasy ho mpiray tsikombakomba na minia mikimpy amin’ny fanaovana «trafikana olombelona». Any amin’ny tandrefana ny trafika dia ilaina ho voafaritry ny lalàna: toy sanatria hoe amin’ny taona 2020 mila «mpanompo dimy arivo».